राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी, के छ नयाँ अध्यादेशमा ? « Janata Samachar
राष्ट्रपतिबाट नागरिकता अध्यादेश जारी, के छ नयाँ अध्यादेशमा ?
काठमाडौं । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो ।
जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी अध्यादेश जारी भएको बताइएको छ । हाल जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिको सन्तानले वंशजको नागरिकता नपाउने व्यवस्था थियो ।
मधेसकेन्द्रित दलको मागअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुभएको थियो ।यसलाई मधेसवादी दलको ठूलो उपलब्धी मानिएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा २ वर्षभन्दा अघिदेखि छलफलका क्रममा छ । तर सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशबाट नागरिकता ऐन ल्याएको हो ।
के छ नयाँ अध्यादेशमा ?
अध्यादेशमा नेपाल सरत भित्र भन्ने शब्दलाई नेपाल भित्र भनिएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते भन्दा अगाडी जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको तर, बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक पाउने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो । यस्तो नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन । निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
नागरिकता अध्यादेशमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको तर, बाबु पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजले बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।